TTSweet: Blue Mountain ဆေးရုံသို့ တစ်ခေါက် ...
Posted by T T Sweet at 2:23 PM
တခြားအကြောင်းအရာတွေထက် ဂျုဂျုလေးတယောက် သူ.အဖေကြီးဖြစ်တာကိုထိတ်လန်.ပြီးတော. အုန်းထမင်းတပန်းကန်ကြီးနဲ.ကြက်သားဟင်းတ၀က်ကို သူတယောက်ထဲကုန်အောင်စားလိုက်တယ်ဆိုတာကိုဖတ်ရတော. ၀ါးလုံးကွဲရီမိတာ သီးတောင်သီးပါတယ်။
သူလေးလဲ တောင်တက်တောင်ဆင်းတွေကြောင်.ကိုယ်ခနာပင်ပန်းတာရော၊ အဖေဖြစ်တာကို စိတ်ပင်ပန်းတာရောတွေကြောင်.ဖြစ်မယ်ထင်တယ်၊ အများကြီးစားလိုက်တယ်ဆိုတာ။
Vista February 16, 2012 at 3:41 PM
မီနီကူးပါးကြောင့်ပါ သွေးတိုးတာ နှလုံးကိုလေဟပ်သွားတာပေါ့ ... တီဆွိကြောင့် ဟိဟိ.. ( ညစ်အောင်လုပ်သွားသည်)
သူများတို့ အကိုကြီး ညက်မှောင်ကြုံ ကြီးကို မနှိပ်စက်နဲ့ နော် တီဆွိ
AMK February 16, 2012 at 3:52 PM
တီဆွိ ရဲ့စုံထောက်ဝတ်ထုလို့သဲထိတ်ရင်ဖို ဆန်ဆန် နဲ့ စတဲ့ဇာတ်လမ်း ကြေညာ(အသက် ၄၀ကျော် ပေမဲ့အသက်အစိတ်ခန့်သာထင်ရသော ခပ်ချောချော ) ၀င်ပြီး ဦးခြိမ့် ရဲ့ရင့်သိမ့် တုန် အဖြစ်ဖတ်လိုက်ရတာ နောက်ဆုံး မှ ဟင်းချနိုင်တော့ တယ် ဂျူဂျူလေး လန့်ပြီး ထမင်းတွေ အများကြီး စားတာဖတ်၇တော့ သဘောကျမိတယ် :D
ဇာတ်အထွတ်အထိပ်တွင် ဦးခြိမ့်အတွက် စိုးရိမ်သည်မှာ တ၀က်၊ တီတီဆွိ၏ တယောသံနောက်ခံနှင့်ဟုရေးသည်ကို အော်ရယ်မိသည်မှာ တ၀က်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံး ဘာမှမဖြစ်ဆိုသောကြောင့် စိတ်သက်သာရာ ရသွားလေသည်။ ဦးခြိမ့်ကား Input, Output ကို balance ဖြစ်အောင် ထိမ်းသိမ်းနိုင်သူပါတကားဟုလဲ ကောက်ချက်ချသွားလေသည်။ (ဂျူဂျူလေး လန့်ပီး ထမင်းတွေစားတယ်ဆိုတာလဲ ဖတ်ပြီး ရယ်မိသေးတယ်။)
ဘာမှမဖြစ်တာရော... တီတီဆွိ အရေးအသားကောင်းတာရော....
ပါးစပ်မစေ့နိုင်အောင် တွေးတွေးပြီးရယ်ရပါ၏ ..... :D
ဆုမြတ်မိုး February 16, 2012 at 4:42 PM
ဟီးဟီး ဦးခြိမ့်တော့ဒီစာကိုဖတ်ပြီးဘယ့်နှယ်နေမယ်မသိ သမီးတို့ဖြင့်ပါးစပ်မစိနိုင်တော့ဘူး တီဆွိရယ်..။ ဂျူဂျူးလေးသနားပါတယ် စိတ်ပူရှာတာနေမယ်..။
မေဓာဝီ February 16, 2012 at 6:21 PM
ဘာမှမဖြစ်လို့ တော်ပါသေးရဲ့ တီတီဆွိရယ်
တီတီဆွိ အရေးအသားကြောင့် ဖတ်ရင်း စိတ်ပူရာက ရယ်ရသေးတယ်။
မြသွေးနီ February 16, 2012 at 6:57 PM
အစချီထားထဲက လှို့ဝျက်သည်းဖိုများလားလို့ ထင်မိတာ ကွက်တိပဲ..။ တော်သေးတာပေါ့..။ အဆုံးသတ်မှ သက်ပြင်းချရင်း ရယ်မိတော့တယ်။ အစ်မဆွိနဲ့ ဂျူဂျူလေး ဘယ်လောက်တောင် စိတ်ပူသွားခဲ့ရလဲဆိုတာ တွေးမိတယ်။ နောက်ဆို အစ်မဆွိ ညက်ခုံးရှုံ့ကြီးကို သေချာ ဂရုစိုက်တော့နော်..။ ဂျူဂျူလေး ထမင်းစားအောင်ဆိုပြီး ဦးခြိမ့်ကိုလဲ အမောတွေဆို့အောင် လုပ်မနေနဲ့ဦးနော်... :))
သိင်္ဂါကျော် February 16, 2012 at 7:09 PM
လာဖတ်ပါတယ်.. တီတီဆွိ... :)
ယောင်္ကျားရဲ. intake နဲ. output လဲဓာတ်ပုံနဲ.တကွ ဘလော.ဂ်ပေါ်ရောက်ကရောဘဲနော် အဟီးဟီး
Anonymous February 16, 2012 at 9:10 PM
You are really rich in sense of humour.Since beginning your writing drag me to the end like riding rollacosta:))
You covered TT aye face with leave but you had shown in another post already.
San San Htun February 17, 2012 at 4:57 AM
တီတီဆွိ မီနီကူးပါး ပူဆာလို့သွေးတက်သွားတယ် ထင်နေတာ :)..ဦးခြိမ့်အမြန်နေကောင်းပြီး ညက်မှောင်ကြီး ကုပ်နိုင်ပါစေ..
စုချစ် February 17, 2012 at 12:19 PM
နာ ထင်တာကတော့ မီနီကူးပါးကြောင့် ဖစ်မှာပါအေ.... ခစ်ခစ်....
တော်သေးတာပေါ့ဟယ်.... ဘာမှ မဖစ်လို့.... နာ့အတိုကြီးကို သိပ်မနှိပ်စက်ပါနဲ့ဟ.... သူတထုထု ဖစ်လို့ ရန်ဖစ်စရာ မချိရင် နာ ဒွတ်ခရောက်ပမယ်....း)
ကိုလက်စထရော စစ်ကြည့်သေးလား ချိုကြီး.... အစားစားတာလဲ ဆင်ခြင်လေ...အဆီတွေ များတာ သိပ်မစားနဲ့...း)
မဒမ်ကိုး February 17, 2012 at 7:15 PM
တောင်မတ်တယ်ဆိုလို့ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ဖတ်နေတာ .ဦးခြိမ့်ဆေးရုံရောက်တဲ့ပုံမှုန်ကုပ်ကုပ်နဲ့
ရှုးရှုးအိုးကြီးလဲမြင်ရော ရေသောက်ချင်တဲ့စိတ်ပျောက်ပြီး အော်ကိုရီမိလိုက်တော့တယ်
တော်သေးတယ် အနားမှာဘယ်သူမှမရှိကြလို့း))
အခြေအနေထင်သလောက်မဆုိုးဘူးလို့ ပြောရမှာပေါ့။း)
မယ့်ကိုး February 18, 2012 at 11:45 AM
မမစာရေးတာ အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။ ကြောက်စရာ၊ထိတ်လန့်စရာတောင် ဟာသလေးပါအောင် ရေးတတ်စိတ်ထားတတ်တာ။ ဂျူဂျူလေး ထမင်းစားခန်းက ရယ်လိုက်ရတာ။ ဂျူဂျူလေးက လိမ္မာပါတယ်။ အမေတွေ စိတ်ပူနေချိန်မို့ သူ့အတွက် စိတ်မရှုပ်ရအောင် ထမင်းလေးကုန်အောင် စားပေးရှာတယ်။ ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ။
TT aye February 18, 2012 at 1:27 PM
I read two times and still LOL. Although, I was with you thorough out your ordeal....your writing skill still make me amazingly interesting. Keep it up.
Sorry, U Chaint..we really worried for you then and now we all can laugh.
Cho Lay, you have huge sense of humour.
p.s: We had the best Coconut rice and chicken curry on that day.
သွက်သွက်လေးရေးထားတော့ တစ်မျိုးဖတ်လို့ကောင်းပြန်ရော တီဆွိရေ။ ဦးခြိမ့် ဆေးလိပ်ဖြတ်တာ ကောင်းတယ်။ မိသားစုတွေ သူ့ကျန်းမာရေးအတွက် စိုးရိမ်စရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့။ တီဆွိရဲ့ ဘလော့ကို ဖတ်ဖြစ်နေတာကြာပြီ။ ကျွန်တော်က ကျူးပစ်သိပ်မ၀င်ဖြစ်တဲ့ ကျူးပစ်သူ တစ်ယောက်ပါ။
မမိုး February 18, 2012 at 7:48 PM
ဒီလို အချိန်မှာတောင် ဘလော့ဂ်အတွက် စဉ်းစားပြီး ဓါတ်ပုံ
ရိုက်ယူလာနိုင်လို့ပါ။ ဆီးအိုးကို မြင်တော့ တယောက်ထဲ ရယ်လိုက်ရတာများလေ...
အရေးအသားကလဲ တနေ့ထက် တနေ့ပိုပြီး ကောင်းလာတယ်။
ကိုယ်သာ ဘလော့ဂ်ဂါဆုပေးပွဲ လုပ်နိုင်ရင် ဆွိကို ၁ ပေးတယ်...
အလွန်အလုပ်များတဲ့ နေ့ကလွဲပြီး နေ့တိုင်းလာဖတ်ဖြစ်တယ်။။။။။
မမိုး February 18, 2012 at 7:57 PM
ဦးခြိမ့် ဂျူးဂျူးကို စိတ်ပူတတ်တာ ဖတ်ရတော့ ဒို့အဖေကို
သူအိမ်မှာရှိတုန်း အိမ်သာထဲဝင်တာ၊ ရေချိုးခန်းထဲဝင်တာ နဲနဲကြာတာနဲ့ တံခါးလာထုတော့တာပဲ...တံခါးဂျက်မချဘို့ ပြောတာလဲ
တချိန်လုံးပဲ...ဂျူးဂျုးရော ဆွိရော ကံကောင်းတယ်နော်။
ဂရုစိုက် အလိုလိုက်တဲ့ အိမ်ဦးနတ်ကြီးရထားတာ...)))
susu February 19, 2012 at 2:32 AM
rose of sharon February 20, 2012 at 1:40 PM
မ... ဘလော့ဂါတကယ်ပီသတယ်... ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာတောင် ဓာတ်ပုံအရရိုက်ယူထားနိုင်တယ်း))
Mrs. Bagel February 21, 2012 at 12:22 AM
ပထမဆုံးကြိမ်လာဖတ်တာပါ။သွေးလှူထားတော့ အားနည်းသွားတယ်ထင်ပါ့။ အမှတ်တရပေါ့ အစ်မရယ်။ Ambulance စီးဖူးသွားတာပေါ့။ လင့်ယူသွားပြီနော်။
Anonymous March 8, 2012 at 9:07 PM
" တော့ ... ကိုကိုခြိ်မ့် ... တော့ဟာက မပြီးတော့ ဘူးလား.. " ဟု ခဏခဏ မေးနေရသည်။
...ဝါးလုံ့းကွဲအောင် ရယ်မိပါတယ်...အကို နဲ့ အမ တို့ ရယ်....
ချာတာ မှာ ကိုကိုခြိမ့် နဲ့ ခင်ခဲ့ ဖူးတဲ့ ...